I-Intanethi ye-Intanethi kwiNkqubo yoLwazi lweJografi- iGeofumadas
Masters Online e Geographic Information Systems
NgoFebruwari, 2016 Ukufundisa i-CAD / GIS, Okufumaneka
Ngokuqinisekileyo, le ngenye yezona zinto zingcono kwiindlela ze-intanethi ezisebenzisayo kwiindawo ze-geospatial, kwaye zikhonjwe ngokukhethekileyo ngeSpanish.
Inkqubo ye-MSc Graduate Programme (GIS) –Inzululwazi yezeNzululwazi (iJografi yoLwazi lwezeNdawo kunye neNkqubo), enikezelwa yaze yanikwa igama University of Salzburg, E-Austria, ngeSebe layo Geoinformatics - Z_GIS, kuphuhliswa ngesiSpanish yi-UNIGIS Latin America kunye nomxholo wayo oyimodyuli iquka amanqaku apheleleyo e-120 ECTS.
Le nkqubo ihlangabezana nazo zonke iimfuno zemfundo ezifunwa yiYurophu yeNyunyana ye-European / Master Magist of Science ngokwemiqathango ye-Bologna. Okubhalwe kwikharityhulam kuchazwe ngezantsi.
Igrafu elandelayo ibonakalisa umyalelo wecandelo njengoko izifundo ezihlukeneyo zihanjiswa; Njengoko ubona, ngaphaya ukuqinisekiswa kumazwe ngamazwe iNkosi, indlela kancane i ukukhulelwa esebenza kakhulu kwi ezilithoba elilingana ukuyigubungela kwinkalo yokufunda, imimandla izixhobo iimodyuli ezingundoqo, nokuba ukugeleza sebenza ngaphakathi kwiprojekthi ye-GIS eqhelekileyo. Oku kwapheleliswa yi ugxininiso esebenzayo academic umsebenzi (Pata) kunye Ekunokhethwa, zifundiswa ezikhethiweyo ezongezelelweyo neemodyuli ukujongana ezikhethekileyo kakhulu kuphuhliso yeprojekthi imiba mnqongo kwibakala.
Umsebenzi wesigqeba ubonisa amandla omfundi wokuzimela ngokuzimeleyo ingxaki, ukusebenzisa indlela yezobugcisa nokubonisa iziphumo ngendlela eqondakalayo, ekuqwalaseleni ubuchule bezesayensi kwiprojekthi yezemfundo.
Isiqulatho seModyuli ye-Intanethi ye-Intanethi
Njengoko abafundi bephuhlisa iiprojekthi kunye nezenzo ze-Master, basebenzisa izisombululo ezahlukeneyo zeSoftware ezisetyenziswa rhoqo kwiGeo-Engineering. Zombini iisoftware zobunini, ezinje ngulo uboniswe ngezantsi, kunye nesoftware evulekileyo, ngokungathandabuzekiyo umdlali ongenakuphepheka kwinkqubo yendalo yezisombululo.
Módulo 1: Isingeniso kwi-SIG
Le modyuli ibonelela ngentshayelelo ngokubanzi kuqeqesho lwe-GIScience kunye netekhnoloji Inika isigama se-GIS kunye nezinto, intsingiselo kunye nembali. Ikwajonga ezona zinto ziphambili nezangoku zetekhnoloji ye-Geoinformation (GI) elandelwa yingxoxo ngokudityaniswa kolwazi lomhlaba ngaphakathi kwesakhelo seTekhnoloji yoLwazi kunye noNxibelelwano (ICT). Kukwaqatshelwe noluntu olusakhulayo lwabasebenzisi be-GIS kunye noshishino olukhulayo lwe-GI kunye nentengiso. Imodyuli iqukumbela ngezifundo ezinikezelwe kwiinkqubo zesalathiso sendawo, kugxininiswa ukubaluleka kokumiswa kwendawo kunye nolungelelwaniso, kunye nokwazisa kuqikelelo lweemephu.
Módulo 2: Iimodeli zeenkcukacha zeZithuba kunye neZakhiwo
Imodyuli iveza imiba yendawo kwaye ibeka isakhelo sokucinga kwendawo; Ngale ndlela umfundi unikezwa ngcamango esondeleyo yohlobo oluthile lweenkcukacha zendawo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ezininzi zezifundo aziyiyo yendawo kwaye abanye abazi kakuhle indawo yendawo. Imodyuli yenzelwe ukunqoba ukusilela kwaye ngexesha elifanayo ibonise indlela ukucinga ngendawo kunye nendlela yokwenza imodeli inokusetyenziswa ngayo kwiinkqubo zekhompyutha.
Módulo 3: Ukufunyanwa kunye neMithombo yolwazi lweSithuba
Imodyuli igxininise ekufuneni kwedatha yendawo, imigaqo kunye nobuchwepheshe babo. Ubungakanani bwedatha buhambelana ngqo neendlela zokuthenga ezifunyenweyo; Ngoko ke, iikhrayitheriya kunye neempawu zamgangatho zenziwa. Ukwanda ngokukhawuleza kwe-geodata kunye nokufumaneka kwazo akufuneki kuphela imilinganiselo esemgangathweni, kodwa ukufundwa kwemvelaphi yabo kunye nenjongo, okwenza kube yimfuneko ukuphatha imethadatha, phakathi kwezinye ukukhangela ngokufanelekileyo. Imodyuli iqukumbela ngengxoxo kwimicimbi yezomthetho neyokuziphatha echaphazelekayo.
Módulo 4: Ulawulo lweProjekthi
Ekuqaleni, i-GIS yayibonwa njengomngeni ojamelana nenkqubela phambili yetekhnoloji. Namhlanje kuyaqondwa ukuba imeko-bume yombutho yeyona nto iphambili ekuphumeleleni komiliselo okanye iprojekthi ye-GIS, nangona kunjalo kubalulekile ukuqaphela ukuba iiprojekthi zingaphezulu kwezakhelo zombutho ukufezekisa iinjongo zokusebenza. Ukujonga inkqubo yokuhla ezantsi yocwangciso lwesicwangciso-qhinga seshishini, esikhokelela kwimisebenzi ethile kwisicwangciso seshishini, kunokwenzeka ukuba uqaphele "ukujongwa kweprojekthi" njengenxalenye ephambili. Ulawulo lweprojekthi luluqeqesho apho iinjongo zichaziwe kwaye iinjongo zifezekisiwe, <ngelixa kusenziwa ukusetyenziswa kwezixhobo (ixesha, imali, italente yabantu, indawo, njl. njenge-GIS kwimibutho nakucwangciso, ngaphandle kokushiya ecaleni imigaqo yokulawulwa komgangatho kunye nemiba yezomthetho, iqukumbela ngokukhankanywa kwezinto ezintsha kwimakethi ye-Geoinformation.
Módulo 5: IiNgcaciso zeZithuba
Imodyuli iseka isiseko sokucwangciswa kwedatha ngaphakathi kwenkqubo yolawulo lwedatha ye-DBMS. Umxholo ukwacebisa ngeendlela kunye nezixhobo zoyilo lwe-DBMS. Iindidi ezahlukeneyo kunye nolwakhiwo lwe-DBMS kuxoxwa ngazo kugxilwe ngokukodwa kulwalamano / kwinto ejolise kwinto kunye nolwalamano olunento. Ukusetyenziswa koLwimi oluCwangcisiweyo loMbuzo (i-SQL) kukwaboniswa kokubini ngokwembono yoluvo oluyimfuneko ukuze ukwazi ukudibana kwindawo yogcino lwedatha kunye nokuchaza ubume bayo. Icandelo lesibini lemodyuli linikezelwe kwi-geoDBMS, Oko kukuthi, oovimba abasebenza ngokukodwa njengendawo yokugcina idatha yendawo. Ngokukodwa, ukumelwa kwezinto ezilula kunye nokufikelela okuneempawu ezininzi ngokuchanekileyo kwidatha yendawo kuyaphononongwa. Iqukumbela ngokuchazwa kweekhonsepthi zokugcina (zokugcina ezinkulu ezakhiweyo) kunye nezibonelelo zokumbiwa kwedatha (ukukhangelwa kwedatha okucwangcisiweyo).
Módulokanye i-6: Iiprographic and Visualalization
Le modyuli igxile kwiinjongo, ukugqumisa kunye nokuyila. Oku kuthetha ukuthini, kutheni kunye nendlela yokuthetha ngokubanzi. Iiprotography kunye ne-GIS zibonwa apha njengezixhobo zonxibelelwano. Ukusetyenziswa kwangoku kwincwadana kwimibala yemifanekiso kunye ngokulandelelana kwi-GIS, baye batshintsha kakhulu ukuyila nokuveliswa kweemephu kunye nemifanekiso. Kwimodyuli iziseko zemibala kunye nezonxibelelwano ezibonwayo zihlaziywa. Iindlela zobuboniso obubonakalayo, obunamandla, kunye nomhlaba, kunye neefowbhi ezibonakalayo ziluhlu lweengxoxo, zibandakanya ubuchwepheshe bokukhawuleza ezifana nezixhobo zokuboniswa ngokuzenzekelayo kunye nokunikezelwa kwezinto ze-3D zendawo.
Módulo 7: Uhlalutyo lwendawo
Uhlalutyo lwendawo yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kuyo nayiphi na inkqubo ye-GIS. Inkqubo yokuhlalutya idatha yendawo ebizwa ngokuba luhlalutyo lwejografi okanye uhlalutyo lomhlaba. Oku kusetyenziselwa ukuvavanya, ukuqikelela, ukuqikelela, ukutolika kunye nokuqonda ulwazi lwejografi. Imodyuli ibonisa ezona ngcinga ziphambili zohlalutyo lomhlaba kunye nenkcazo yokusebenza-izixhobo zohlalutyo kunye nokuhlelwa kwazo, ezibonakala ngemizekelo emininzi eboniswe kakuhle. Imodyuli inika ingqalelo ekhethekileyo kwimicimbi ye-algebra, uhlalutyo olusekwe kumgama, uhlalutyo lwenethiwekhi ye-topological, ukudibanisa, kunye nohlalutyo olusetiweyo, phakathi kwabanye. Umxholo uqukunjelwa ngengxoxo yeemodeli zenkxaso yendawo ekusetyenzisweni kwezigqibo ze-SDSS kunye nendlela ezisekwe ngayo kwiziphumo zohlalutyo lwejografi.
Módulokanye i-8: Iindlela zokuFunda
Imodyuli inika abafundi kunye nezikhokelo umyalelo ukwenzela ukulungiselela uphuhliso mqondo yeNkosi, nto leyo kwakhona kubalulekile ukusebenza ulwazi olusisiseko ngokwenzululwazi. Ezi ndlela zibandakanya zombini iziseko kwithiyori yenzululwazi, kwakunye namacebo aluncedo umsebenzi lombhalo kunye nenkqubo yokubhala ngokwayo. Iinjongo ze kwimodyuli ke intshayelelo kwithiyori yenzululwazi, kuquka indawo geoinformatics kwi kuluhlu lwamacandelo zenzululwazi, ukuququzelela imisebenzi yesayensi lombhalo sijonge ukusungulwa iindlela zokufunda kunye nokusebenza, intshumayelo imigaqo imithombo kunye nokusetyenziswa iindlela zobunzululwazi, intshayelelo ekuyilweni kunye nokuvavanywa yeengcinga, ebonisa iimpawu ezibalulekileyo zokumisa amaphepha enzululwazi kunye nobuchule intshayelelo ntetho (intetho, ipowusta).
Módulo 9: Izibalo zendawo
Le modyuli ijolise kubalo-manani nokubaluleka kwayo ekusebenziseni ngendlela eyiyo i-GIS, igxininisa umahluko phakathi kweenkcukacha-manani kunye neenkcukacha-manani zomhlaba. Iziseko zenkcazo kunye nohlalutyo lweenkcukacha-manani ziqwalaselwa kuqala, zilandelwa sisahluko esimalunga nendawo ezichazayo. Iindlela kunye nobuchule bokuqhubekeka kwedatha ngokwamanani nazo ziyaziswa kwaye zixoxwe, ezinje ngokulungelelaniswa kwendawo, ukuhanjiswa kwendawo, uhlalutyo lweepateni, uhlalutyo lweenkcukacha manani lwedatha, uhlalutyo lwamaqela, kunye nomgangatho wendlela. Ikwaphanda isidingo kunye neendlela zokufika kuhlalutyo lwedatha esemgangathweni (umzekelo, uhlalutyo lwedatha yokuhlola - i-ESDA). Ekupheleni kwemodyuli, amanani-manani e-geo azisiwe, kugxilwe ngokukodwa kwi-Kriging nakwi-ariography.
Módulo I-10: Iinkcukacha zeZibonelelo zeZithuba zeSithuba-IDE
Okwangoku kwiplanethi yonke kunye nakwiiyonke iikhredithi, iiprojekthi zivela ngenjongo yokwakha izibonelelo zendawo yedatha. Ingqwalasela yayo kukuphucula ukufikeleleka kwidatha ye-geospatial. Ngenxa shift lo wesiqhelo, ezihamba iinkqubo neenkonzo, Spatial Data Neziseko, imarike ye Space / Datawarehouses kunye GeoMarketing Data lalibizwa ngokuba amagama angundoqo kwinkalo ye-GIS. Lo mnqongo waveza neengqikelelo ezingundoqo ezixhasa nokuvavanya ifuthe kwezopolitiko nezoqoqosho processing geo-kwasasazwa kunye nenkqubo OGC (Open Consortium GIS). Imodyuli kwakhona lizisa uphuhliso lobuchwepheshe kunye methodological ukuphumeza kwi WMS, WFS, GML kunye XML phakathi kwezinye imigangatho emitsha ihlabathi banxibelelane geoinformation evela amaqonga intranet, INTERNET KUNYE imiba Hambayo.
ImiSebenzi yoLwazi kunye noMsebenzi wezeMfundo
Ngale modyuli, umfundi kufuneka aqale ukusebenzisa ulwazi alufumene kuyo yonke inkqubo, edityaniswa namava abo obuchwephesha ukuze afumane iziphumo ezifanelekileyo nezisetyenzisiweyo. Kukwenzelwe ukuba kukhuthazwe isifundo esizimeleyo sokufumana ulwazi kwiinkalo ezithile zomdla zomfundi ngamnye. Okokugqibela, ukuthatha inxaxheba koluntu lwezifundo kwiinkomfa, iikhosi zangaphandle kunye noqeqesho olunxulumene nomhlaba we-GIS luyakhuthazeka kwaye lwamkelwe.
Umfundi unokukhetha iimodyuli ezizodwa kwimimandla eyahlukeneyo yesicelo kwi-GIS ngokulandelayo. Ininzi yamathumyuli akhethiweyo agxininise ngakumbi kwi-GIS eLatin America.
Imodyuli nganye ekhethiweyo inika abafundi abathathu (6) iikredithi ze-ECTS.
I-ArcGIS yoKhuselo lweService nge-Python GIS kunye nokuSuka kweSistim
SIG kwiMpilo kaRhulumente
SIG, Iingozi kunye neentlekele
SIG kwi-Community / Development Territorial
SIG kwiNkonzo zoLuntu
SIG kunye noLimo
SIG kunye neNdalo
UkuPhuhliswa kwezicelo (Ukusebenzisa iJava) Ukuphuhlisa izicelo kunye ne-OSM
Umfundi uya kukhetha isihloko sazo zophando ukulungiselela iprojekthi yokugqibela kwi-GIS, ngokwemfuno yabo, ukusebenzisa ulwazi olufunyenweyo kwiprogram.
UNIGIS Latin America unikeza iinkqubo imfundo kude kwi-GIS ngeSpanish kubaqeqeshi abavela eLatin America. Abafundi banelungelo lokufumana i-Master of Science yaseYurophu (M.Sc.) kwi-GIS, Master of GIS; okanye iUNIGIS Professional, i-Specialization kwi-GIS, kunye Yunivesithi yaseSalzburg, E-Austria kwaye bajoyina abangaphezulu kweziqu ze-500 abaye baba yiinkokeli kunye neengcali kumaziko, imibutho kunye nenkampani kuzwelonke, kwiphondo nakwihlabathi.
Kwinqanaba lemimandla, i-UNIGIS inamanani kwiindawo ezahlukeneyo zaseLatin America, ubuncinane kumazwe alandelayo nakwiiyunivesithi:
I-Argentina: IYunivesithi yaseBelgrano (UB)
IBrazil: IYunivesithi yoMbuso weRio de Janeiro (UERJ)
I-Chile: IYunivesithi yeSantiago yaseChile (USACH)
IColombia: Yunivesithi yaseCESI
Ecuador: IYunivesithi yeSan Francisco de Quito (USFQ)
EMexico: IYunivesithi yaseMetropolitan University (i-Autonomous Metropolitan University)
EPeru: IYunivesithi yesizwe iFrederico Villarreal (UNFV)
Kungenzeka ukuba i-Master GIS Online apha iphakanyiswe yona ngemibuzo enjengale:
Kude kube nini inkosi?
Zindleko zantoni kwaye ziziphi iindlela zokuhlawula?
Ngaba i-intanethi ngokupheleleyo okanye idibeneyo?
Umjikelezo olandelayo uqala nini?
Gcwalisa ifom kwaye uza kuthunyelwa ulwazi malunga nendlela yokuqhuba.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Isebenza njani iRhafu yePropathi kumazwe angama-27 ehlabathi
Post Next Mapping Project Land Securities in Latin America kunye CaribbeanOkulandelayo »
Iimpendulo ze-11 ziye "kwi-Master's Degree kwi-Geographic Information Systems"
Ndibonisa ulwazi malunga nenkosi. Merci
Eduardo Lopez uthi:
Ndinomdla wokwazi iindleko kwaye ukuba ngaba lukhona uhlobo lokufunda, izaphulelo okanye imali.
Ngaba zonke iinkosi zikwi-Intanethi?
EMexico, usiqinisekisa njani isidanga se-Master?
Ndidinga ulwazi oluneenkcukacha malunga neestria
Luis Carvajal uthi:
Ndinomdla kwi-GIS yokusebenza
Sawubona, ndicinga ukuba yinkqubo ebalaseleyo, kodwa ndifuna ukwazi iindleko kwaye ukuba baqhuba uhlobo oluthile lokubhalisana.
Ngokuhlwa ebusuku ndifuna ukuthatha inxaxheba, kodwa ndineendleko, andiyi kuba ne-scholarship ku-50% ukuyisebenzisa kwaye andinayo inkqubo endizamile ukuyilanda kwaye andinako.
Iindleko zolwazi nceda. Enkosi
Ndifuna ulwazi lwenkosi .. Siyabonga
Ndingathanda ukufumana ulwazi oluninzi malunga nokulawula.
Sawubona! Ndingathanda ukufumana ulwazi oluninzi malunga nokulawula.
NDAKHONA KWEENKCUKACHA NGOKWENZA IINKCUKACHA NGEZINTLOKO